हिन्दु धर्मलाई किन वैज्ञानिक धर्म भनिन्छ ? यस्तो छ कारण – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/हिन्दु धर्मलाई किन वैज्ञानिक धर्म भनिन्छ ? यस्तो छ कारण
हिन्दु धर्मलाई किन वैज्ञानिक धर्म भनिन्छ ? यस्तो छ कारण
हिन्दु धर्मावलम्वीहरु पूजा गर्दा शंख तथा घन्टी बजाउँने गर्छन् । तर यसको महत्व ठूलो रहेको वैज्ञानिकहरुले बताएका छन् । वैज्ञानिकहरुका अनुसार मन्दिर तथा पूजा कोठामा शंख-घन्ट बजाउँदा वातावरण पवित्र हुनुका साथै किटाणुहरु टाढा जान्छन् । एजेन्सी
लकडाउन उलंघन गर्नेलाई नियन्त्रणमा लिएर २ घण्टा ‘क्लास’